Iwo Makadhinari Anongedzera Symbolism & Zvinorehwa | Zviratidzo & Zvinorehwa - Zviratidzo Zvinoreva
Makadhinari Mafambiro Ezviratidzo & Zvinorehwa
Sezvo vekare zvishoma nezvishoma zvavakakura vachiwedzera kuziva nyika yavo, pfungwa yenzvimbo nenzvimbo yakave yakakosha kwazvo kune vatengesi, vavhimi, uye nemweya inoshuvira iyo yaingoda kuona kana nyika iri, zvechokwadi, yakati sandara.
Neraki kwavari iyo Nyika yakanga iine mushandisi-inoshamwaridzika fomu yedenderedzwa.
Zvakadaro izvo hazvina kubatsira kubva kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe zvakachengeteka uye kakawanda, ndoda kutaura nzira.
Ichi chikamu nei Nyeredzi mapatani akave mepu yekutanga yekufamba.
Chero bedzi denga raive rakajeka vanhu vaigona kuona nzira dzavanofanira kutora zvichibva pakuchenjerera kuteedzera nyeredzi panguva dzakasiyana dzegore.
Saka iko kupi uye rini iro zano reCardinal madhiri rakatanga?
Ndiani akagadzira maCardinal Mafambiro
Hapana munhu anogona kuve nechokwadi chekuti ndepapi chaipo pfungwa dze mawodzanyemba , chamhembe , mabvazuva uye madokero akabata.
Pfungwa ye'kutungamira 'yaitsamira zvakanyanya patsika, ngano uye nemutauro chaiwo. Mune mamwe marongero pakange paine mamwe marongero senge 'kumusoro' kana 'kumusoro' uye 'pasi' achigadzira mapoinzi matanhatu panzvimbo peanokosha mana.
Mukupa mazita madhimoni dzinza kana boka revanhu rinogona kumisikidza mazwi avo pakubata hove, kurima, hondo kana pakaungana vanhu. Vanogona zvakare kuisimbisa pazvinhu zvinooneka muvhu senzizi, masango kana mawere.
Kamwe mazwi akasarudzwa mamwe mazwi anotsanangurwa akapihwa hwakawanda hutungamiriri, senge 'kuenda' kana 'kure'. Semuenzaniso wazvino, dai tisina kana kuziva gwara ratinga nongedzera kumberi tichiti 'kofi' kana ndimo munogara mota yemangwanani, uye neshure tichiti 'kure nerufaro'.
Kune mazwi echiChirungu, North yakabva mumutauro wekare weEurope ine izwi raireva 'kuruboshwe'. Izvi zvinodaro nekuti panokwira zuva mangwanani Mangwanani ari kuruboshwe kwawo. Maodzanyemba anotora kubva mushoko rinoreva zuva, zvichinongedzera kumatunhu anodziya epasi. Kumabvazuva zvinogona kunge kwakatangira mune chirevo chinoshandurwa se 'kupenya' nekuti ndipo pakabuda zuva, uye West zvinoreva 'kudzikira' sekunyura kwezuva.
Zvekare, izvi zvinoratidza kuti vekare vaivimba zvakanyanya pasimba rekucherechedza kutungamira mutauro wavo nemaitiro.
Kusvika pakuvadaidza makadhinari mapoinzi, iro izwi rinoratidza muzana ramakore regumi nemana, rakatorwa kubva mushoko rechiLatin rinoreva kutanga, musimboti kana kukosha.
virgo mukadzi anodanana nemurume libra
Metaphysical & Tsika Nyore
Mune dzinenge dzese tsika dzezvemweya dzatinoziva madhairekitori ane chaiwo akanangana. Vane mhepo, a Ruvara , chiratidzo chemhuka, mwaka, vanochengeta uye Vanamwari.
Zuni tsika , semuenzaniso, ine nhanho nhanhatu, iwo makadhinari mana akawedzera pamusoro uye pazasi. Imwe yeaya ane rumwe ruvara uye chisikwa chavanokudza mune avo fetis. Dzidza zvakawanda nezve Zuni Anotora (chirevo: uri kuzoVADA!)
Feng Shui inotiudza kuti iyo Gonzo ndiyo mhuka yekuchamhembe, Tsuro Kumabvazuva, Bhiza kumaodzanyemba uye Jongwe yekuMadokero.
VaCelt inowirirana mafambiro neane e shanu elemental tsamba, East kuve Mhepo , Chamhembe - Moto , Madokero - Mvura , uye North - Pasi .
Marudzi eLakota ipa hunhu kumaKadhinari mapoinzi neNorth sehuchenjeri, Kumabvazuva sekudzikinura, Maodzanyemba sematanho uye kumadokero sekuvhara.
Ah asi hatisati tapedza!
ZveStar Gazers pakati pedu , Nyeredzi Kumabvazuva ndiko Taurus , Maodzanyemba ari Leo , West ndiko Scorpio uye kuchamhembe ndiko Aquarius . Idzi nzira ina dzinotakurawo hunhu hwepasi, moto, mvura nemhepo zvichiteerana.
Saka ndeipi system yaunoshandisa? Mira zvakasimba, tiri kusvika kune izvo chaizvo, zvakanaka, nongedzera.
Mashiripiti & Metaphysics
Tsika dzakasiyana dzenhema dzinoshandisa iwo maKadinali madhairekitori sechinhu chezvitsinga, tsika, ekugadzira mazango uye nekushopera. Kunzwa kuri kuti simba renyika renyika remagineti rinokanganisa uye, zvirokwazvo, rinopa zviitwa zvakadaro.
Sezvo netsika dzakambokurukurwa, muroyi anowanzoshandisa tsamba dzechinyakare seinotevera:
Mawodzanyemba: iyo Earth element , mwaka wechando, nguva yepakati pehusiku, kugara kwemwedzi
Mabvazuva: iyo Mhepo element , mwaka wechirimo, kubuda kwezuva uye mwedzi uri kuwedzera
Chamhembe: iyo Moto chinhu , mwaka wezhizha, masikati uye mwedzi wakazara
Madokero: iyo Chinhu chemvura , mwaka wekudonha, madekwana uye mwedzi unodzikira
Saka, chaizvo izvozvo zvinokanganisa sei mashiripiti maitiro?
Huye, tsamba imwe neimwe yematanho ane chaiwo maitiro. Uchishandisa Kumadokero semufananidzo, mvura inosunga kune yedu manzwiro hunhu, saka ungangoda kutarisana kumadokero kana uchikanda chitsinga chinotarisa pazvinhu zvemoyo.
Kana iwe uchangobva kuwira kunze kwehukama mucherechedzo unotonyanya kukosha nekuvira kwezuva uye nemwedzi uri kupera.
Ikozvino, nekuti Neo-Paganism uye mamwe akawanda esoteric zvitendero masisitimu ane akakwirisa ekuzvifananidza, iyi tsamba yemavara haina kuvezwa mumabwe.
Vamwe vanogona kutarira kunharaunda yavo zvakanyanya sezvakaitwa nevanhu vekare vakasarudza sezvo paine dziva kuchamhembe kwenzvimbo yavanomira, angave 'Mvura' pachinzvimbo chePasi. Izvi zvinoratidza hukama hwepedyo nemasikirwo uye nekunzwisisa kuti Divine ari muzvinhu zvese, zvisinei kuti iwe unofunga kupi mvura inofanirwa kuiswa!
4 Makadhinari Mafambiro Kuputira-Kumusoro
Mazuva ese Horoscope Astros inopa dzakasiyana siyana zviratidzo uye zvinoreva iyo iwe yaunogona kunyorera mune ako emweya maitiro.
Iwo maKadinali Madhairekitori anopa imwezve tambo mukutibatsira kuburitsa zvakavanzika zvikuru zvepasi redu nemaCreative masimba ari shure kwazvo.
chii chiri mukudzokorodza izvozvi
Tora izvo zvaunowana zvinonyanya kukosha kubva pamapeji aya uye rega zvikurudzire zvimwe zvishamiso mune yako yega yadhi yadhi!
iyo inotevera haleys comet
sagittarius mukadzi anodanana nescorpio murume
taurus murume uye leo mukadzi kuenderana
virgo murume uye libra mukadzi hushamwari
taurus mukadzi cancer cancer murudo